Kitapo malefaka tsy vita amin'ny kitapom-bokatra sinoa vahaolana amin'ny mpamokatra turnkey sy mpamatsy | IVEN
Vahaolana IV (kitapo malefaka)
Inona no tafiditra amin'ny tetikasa IVEN Non-PVC kitapo malefaka IV vahaolana turnkey:
Ny vahaolana enti-miasa ao amin'ny IVEN ho an'ny ozinina ara-panafody sy ara-pahasalamana dia misy ny efitrano madio, ny rafitra fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso, ny rafitra fitsaboana rano amin'ny fanafody, ny fanomanana sy ny fampitana ny rafitra, ny famenoana sy ny famonosana, ny rafitra lozisialy mandeha ho azy, ny rafitra fanaraha-maso kalitao, ny laboratoara afovoany sns. Mifantoka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa manokana ny IVEN, manamboatra vahaolana momba ny injeniera amin'ny fomba feno ho an'ny mpampiasa:
1.Non-PVC kitapo malefaka IV vahaolana Mamorona-Mameno-famehezana tsipika:
Ity tsipika ity dia ampiasaina hamokarana kitapo IV an'ny sarimihetsika Non-PVC (PP), ary ny famitana kitapo, fanontana, famenoana ary famehezana amin'ny masinina iray ihany.
Ny haben'ny kitapo IV dia manomboka amin'ny 100ml - 5000ml. Ny antsasak'adiny fotsiny dia mila miova avy amin'ny habe iray ka hatramin'ny iray hafa. Izy io dia manana endrika manokana amin'ny sakan'ny 130mm hamonjy sarimihetsika, afaka mahatsapa ihany koa ny fampiasana sary mihetsika 100%, tsy misy fako.
Izy io dia ampiasaina hanamorana ny kitapo IV vita amin'ny alàlan'ny rano tafahoatra amin'ny 121 ℃. Ny fotoana mandamindamina dia mety manomboka amin'ny 15 - 30 minitra arakaraka ny takian'ny teknolojia famokarana samihafa, azo ovaina ny mari-pana sterilizing.
Azontsika atao ny mampita amina kitapo IV mandeha ho azy sy milina mampidina entana, ary koa ny sarety mandeha ho azy sterilizing mampita ny rafitra ho safidy.
3. Rafitra famonosana:
Izy io dia afaka mamita ny fanamainana kitapo IV, ny famoahana ny famoahana, ny fizahana maivana, ny fametahana ary ny famonosana baoritra.
4. Fitsaboana rano pharmaceutika:
5. Rafitra fanomanana vahaolana:
Ampiasaina izy io mba afangaro miaraka amin'ny rano fanindronana ilay fanafody. Miara-miasa amin'ny tanky fanomanana vahaolana 2 izahay, miaraka amin'ny sela mavesatra Mettler-Toledo, ary ny rafitra fikorontanana andriamby.
6. Efitrano madio sy HVAC:
Izy io dia misy ny rafitra compressor rivotra sy ny rafitra boiler mba hanomezana rivotra sy etona ilaina amin'ny famokarana vahaolana tsy-PVC malemy kitapo IV.
Ahitana karazana fitaovana fanandramana laboratoara rehetra, ary fanaka laboratoara hanandramana ireo santionany amina kitapo IV sy akora fototra, toy ny efitrano fitoniana, HPLC, fitrohana atomika, spectrometer ultraviolet, spectrometer infrared efatra hanova sns.
9. Rafitra fizarana sy fantsona:
Ahitana karazana fantsom-pandrefesana sy fantsona indostrialy ilaina amin'ny fantsom-panafody tsy-PVC IV, toy ny rano voadio, rano fanindronana, etona madio, rano mangatsiaka, rano mangatsiaka, rivotra voahidy, etona indostrialy sns.
Tombony lehibe amin'ny tsipika famokarana vahaolana IVEN Non-PVC malefaka IV:
* Fampiasana sarimihetsika 100%: tsy misy fako eo anelanelan'ny kitapo IV rehetra, mampihena ny fanjifana ara-materialy sy ny angovo.
* Rafitra fanamafisana sy fanamafisana azo antoka: Hamarino tsara fa ny tahan'ny famoahana ho an'ny kitapo IV dia latsaky ny 0,03%.
* Fiovàna haingana: Mila 0,5-1 ora fotsiny ianao vao afaka mifamadika amin'ny haben'ny kitapo IV ka hatramin'ny iray hafa.
* Firafitra mifangaro, mampihena 1/3 ny halavan'ny masinina, mamonjy habaka efi-trano sy vidiny mihodina.
* Rafitra mihazakazaka sy fandefasana stable: ampiasao ny famolavolana combo-port, rafitra fanaraha-maso 1 fotsiny, 1 HMI ary mpandraharaha 1.
* Fantsom-pamenoana azo antoka: Ampiasao ny famenoana fifandraisan'ny patanty, tsy misy vahaolana mihosona, tsy misy zana-kazo mandritra ny fizotran'ny kitapo IV.
* Fikarohana fiara sy rafitra fanilihana diso handà ireo kitapo IV tsy mendrika rehefa mandeha ny satrony.
Fanangonana vidin'ny kitapo IVEN patanty natao ho an'ny kitapo IV:
a. Famolavolana kitapo IV manokana misy sakan'ny 130mm, kitapo IV iray dia afaka mamonjy sarimihetsika 10mm noho ny mpamatsy hafa.
b. Tsy very maina ny sisin'ny kitapo IV sy ny vondrona, ny fampiasana sary mihetsika 100%.
c. Afaka mahangona kitapo 250 iv isaky ny horonan-tsarimihetsika noho ny hafa manana 135mm ny sakany
IVEN dia manana ekipa teknika sy injeniera tena matihanina, ny fiofanana eto an-toerana sy ny fanampiana aorinan'ny varotra dia afaka manome antoka ara-teknika maharitra ho an'ny zavamaniry turnkey NON-PVC IV:
Ny fahaiza-manaon'ny IVEN Non-PVC kitapo malefaka IV vahaolana turnkey fototra:
Ny kitapo IVEN non-PVC malefaka IV vahaolana turnkey dia afaka manome anao karazana kitapo isan-karazany:
Previous: Andalana fitambarana fantsom-pamantarana viriosy
Manaraka: OEB5 zavamaniry turnkey onkey azo atsofoka